Vaovao - Ahoana ny fampiasana tsara ny ridao PVC amin'ny varavarana ary manalava ny androm-piasany
Lamba varavarana amin'ny hafanana ambany
1, aza mifandray amin'ny maranitra mafy PVC lamba malefaka, mba tsy hanongotra ny fiantraikan'ny hatsaran-tarehy.
2, ny fampiasana ny lamba malefaka PVC mila diovina mba hahazoana antoka fa madio, ao amin'ny fanadiovana azo ampiasaina amin'ny rano madio sy ny lamba famaohana mba hamafa, mandrara maharitra asitrika ao anaty rano, aza mampiasa asidra-fototra fanadiovana mpandraharaha.
3, Ny fandravana lamba malefaka sy ny fivoriambe dia tsy atao matetika loatra, mba hisorohana ny fialan-tsasatra, mitarika ho amin'ny fametrahana dia tsy mafy orina.Aza mampiasa ny lamba malefaka azo esorina, ampiasaina amin`ny toerana maina mba hamonjy.
4, PVC lamba malefaka amin'ny fampiasana ny mari-pana dia tsy mety ho avo, ary hentitra amin'ny simika mpiasa, afo na polymer menaka fifandraisana, mba tsy hanimba ny fanatanterahana ny malefaka ambainy, hanafohezany ny fiainana fanompoana.
Ny ambony dia ny famokarana lamba malefaka ho an'ny rehetra mba hampidirana ny fampiasana ny PVC ambainy raharaha mila fiheverana, manantena aho fa hanampy anao, mpanamboatra mampiasa avo-tsara lamba lamba malefaka, ny kalitaon'ny vokatra ambainy azo itokisana, ny vidin'ny ambainy. dia ara-drariny, ny ankamaroan'ny mpanjifa tonga soa sy ny fankatoavana ny vokatra famaritana: tsotra mangarahara efitra lamba malefaka manana mangarahara tsara, dia afaka manakana ny fahaverezan'ny rivotra-conditioning sy fanafanana;dia afaka misoroka tsara ny fanafihan'ny vovoka sy ny taratra ultraviolet, ary koa manana feo tsara insulation vokany, ka ny tontolo iainana miasa dia madio sy mahazo aina kokoa.
EFFECT ENERGY-SAVING: PVC Curtain dia tsy mandany herinaratra, tsy misy tabataba, tsy misy singa mihetsika hanatsarana ny fahombiazan'ny mangatsiaka, mampihena ny fotoana fiasan'ny vata fampangatsiahana, mitahiry herinaratra hatramin'ny 50%.Fihetseham-peo insulation: Ny lambam-baravarana PVC dia afaka mampihena ny decibel feo, misoroka ny fiparitahan'ny tabataba, mampihena ny fahalotoan'ny tabataba, manamboatra efijery entin'ny milina, manatsara ny fampiononana sy ny fahombiazan'ny famokarana.
Fiantraikan'ny rivotra: Ny firafitry ny fametrahana mifanindry, ny rivotra tsara, miaraka amin'ny lanjan'ny lambam-baravarana, amin'ny hafainganan'ny rivotra, dia tsy hiondrika loatra ary hisy fiantraikany amin'ny asa mahazatra.
Fotoana fandefasana: Apr-02-2022